Madaxweynaha Puntland Iyo Wafdi uu Hogaaminaayo Oo Ka qeyb galaya Caleema Saarka Ahmed Madoobe | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Madaxweynaha Puntland Iyo Wafdi uu Hogaaminaayo Oo Ka qeyb galaya Caleema Saarka Ahmed Madoobe
Wararka naga soo gaaraya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in diyaarad sida wafdi uu hoggaaminayo Madaxweynaha Puntland Saciid C/llaahi Deni ay goor dhow u duushay magaalada Kismaayo, halkaasoo ay kaga qeyb galayaan xaflada caleema saarka Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe.
Sida wararku sheegayaan diyaaraddan oo ah mid gaar ah ayaa waxay Wafdiga toos uga dejin doontaa magaalada Kismaayo, taasoo mar kale jebineysa xayiraadii dowladda Federaalka saartay Kismaayo ee ahaa in diyaaradaha aadaya inay soo maraan Muqdisho..
Wararka ayaa sheegaya in wafdi kale oo ka baxaya Garowe, isla markaana uu hoggaaminayo Madaxweynihii hore ee Puntland Senator C/raxmaan Faroole ay ku sii jeedaan magaalada Kismaayo.
Wafdi Wasiiro ah oo Xukuumadda ka socday ayaa shalay gaaray magaalada Boosaaso, si ay ula kulmaan Madaxweynaha Puntland, kuna qanciyaan inuu ka baaqsado ka qeyb galka caleema saarka Axmed Madoobe, hase ahaatee isku daygooda waa ay ku guuldareysteen.
Qaban qaabo lagu soo dhoweynayo wafdigan ayaa ka socda magaalada Kismaayo, iyadoo ammaanka si aad ah loo adkeeyay, waxaana tallaabadan ay mar kale ka dhigan tahay in dowladdu ay ku guuldareysatay isku daygeeda ku aadan inay baajiso caleema saarka Madaxweynaha Jubbaland.
Magaalada Kismaayo ayaa waxaa horay u joogay wafdi ay hoggaaminayaan Madaxweynayaashii hore ee Koofur Galbeed iyo Galmudug, kuwaasoo ka yimid Nairobi, waxaana ay ahaayeen diyaaraddii u horeysay ee jebisay xayiraadii dowladda Federaalka saartay Kismaayo